Resaky ny mpitsimpona akotry : fandrebirebena | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fandrebirebena
Voatery hiverenana indray ity resaka mikasika ny fanavaozana lalàm-panorenana, lasa izay moa no raharaha miteraka resabe. Izany hoe efa nandaitra sahady ilay fandrika fonosin’ilay tetika teo amin’ny fanipazana an’io hevitra io. Tonga dia maro na nandrapaka an’ilay fintana amina firobohana amina fiadin-kevitra momban’izay lalàna fototra tsara anorenan’ny Repoblika manaraka. Toy ny olona iharan’ny fandraikirekena ka tsy mahatsapa akory fa izany fanavaozana lalàm-panorenana izany dia mitaky fotoana mateza ahafahana ifandinika lalina sy ifanakalozan-kevitra maro. Izany hoe raha ilaina atao alohan’ny fifidianana an’izay ho Filohan’ny Repoblika izany fanavaozana izany, dia manalava arak’izay ny fe-potoana ijanonan’i Hery Rajaonarimampianina eo amin’ny toerana misy azy sy ahafahan’ireo tandapany sady anjakazaka no tsy amokatra toy izay efa makaleo ny maro. Izay anefa angamba ny tena tanjona.
Ny hany azo antenaina ho vokatr’izany dia ny fivadik’ilay heverina ho fanavaozana hijanona ho antona adilahy pôlitika fotsiny eo amin’ny fikajikajina anaovan’azy ho fitaovam-pifidianana. Very anjavony amin’izany ady izany izay kely mety anjaran’ny fanatsarana ny Repoblika eo amin’izay fanavaozana izay. Mibaribary amin’izany fa eo amin’ny sehatra pôlitika toy izay misy ankehitriny dia tsy manan-danja izany hoe tombotsoa-pirenena izany, ady seza no hany mafotaka.
Misy aza efa mahatsikaritra sahady fa mety hifandray ny tadi-dokangan-dRavalomanana sy ny an-dRajoelina. Izany hoe ny antony niadina tany aloha mety hampitambatra rehefa mifanena amina fahavalo itambarana aty aoriana. Resaka sy lainga daholo no nafafy sy mbola tohizina afafy. Ny tambajotra eo amin’ny fitondrana moa dia araky ny fahazarany dia arakaraky ny fahatongavana aoriana no asahiany milaza fahamaikana. Telo taona mahery izao no nitantanany ny raharaha-pirenena, tsy atao resaka ny fiveriverenany tamin’izay mety ahiahiana ho fanitsakitsahany an’io lalàm-panorenana izay lazainy fa ilaina hanaovana fanavaozana maika dia maika. Ny Filohampirenena moa anefa an’isan’ilay ankolafin’ny Fitondrana namporisika ny fandaniana an’io lalàna fototra io. Maro no tsy afa-po noho izy io hatry ny ela, fa tsy resy lahatra mikasika ny fahamehana eo amin’ny fanavaozana azy tampotampoka eo, nohon’ny fahitan’ny ankolafy pôlitika tombony rehefa nisitraka ny ratsy sy ny tsara nateraky ny faharatsin’ilay lalam-panorenana fototry ny Repoblika faha-4.